ဘီယာကွောငျ့ ထှကျနတေဲ့ ဗိုကျကို ခပျြရပျသှားစမေယျ့ နညျးလမျး (၄) ခု
HomeKnowledgeဘီယာကွောငျ့ ထှကျနတေဲ့ ဗိုကျကို ခပျြရပျသှားစမေယျ့ နညျးလမျး (၄) ခု
H July 02, 2021
ဗိုကျက အဆီတှကေ တကျဖို့ လှယျသလောကျ ကဖြို့တော့ အလှနျ ခကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆီတှကေို လငျြလငျြမွနျမွနျ ကစြမေယျ့ နညျးလမျးတှေ ရှိလို့ စိတျပူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။
1. စားသောကျမှုပုံစံကို ပွောငျးပါ။
နစေ့ဉျ စားသောကျနတေဲ့ အစားအစာတှေ ထဲမှာ သကွားနဲ့ ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျ တှကေို နညျးနိုငျသမြှ နညျးအောငျ လြှော့စားပါ။ အခြိုရညျသောကျမယျ့ အစား ရနှေေးကွမျးသောကျပါ။ အခြိုမြားတဲ့ နို့ပေါငျမုနျ့လုံးတှေ အစား အစအေ့ဆံတှကေို စားပါ။ သကွားအစား ပြားရညျကို စားပါ။ အသီးအရှကျနဲ့ အမြှငျဓါတျ ပါတာတှကေို ပိုစားပေးပါ။
2. ကိုယျအလေးခြိနျကို လြှော့ပါ။
တဈနကေို့ မိနဈ 30 ခနျ့ ပွေးခွငျးက ကနျြးမာရေးအတှကျ သငျ့လြျောပါတယျ။ အစပိုငျးမှာ မိနဈ 30 ကွာအောငျ မပွေးနိုငျဘူး ဆိုရငျ လမျးလြှောကျလို့ ရပါတယျ။ ပွေးခွငျးက လမျးလြှောကျခွငျးထကျ 2.5 ဆ ပိုပွီး ကယျလိုရီလောငျကြှမျးစပေါတယျ။
တပတျကို နှဈခါ၊ သုံးခါလောကျ ရကေူးပါ။ အရေးအကွီးဆုံးက လှုပျလှုပျရှားရှား နဖေို့ပါပဲ။ တဈနာရီရကေူးခွငျးက ကယျလိုရီ 500 လောငျကြှမျးစေ ပါတယျ။
စကျဘီးစီးခွငျး ကလညျး ကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ အခွခေံကတြဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါပဲ။ တဈပတျကို2ကွိမျ3ကွိမျခနျ့ စကျဘီးစီးပေးလို့ ရပါတယျ။
3. ဝမျးဗိုကျ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
အသကျအောငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးက ဗိုကျကို လုံးဝ ခပျြရပျသှားစေ မှာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ပထမဆုံး အနနေဲ့ အဆုတျက လတှေကေို အကုနျရှူထုတျလိုကျပါ။ 15 စက်ကနျ့ ကနေ 20 စက်ကနျ့လောကျ အထိ အသကျအောငျ့ ထားပါ။ အဲဒိအတိုငျး 10 ခါ ပွုလုပျပါ။ တဈရကျကို4ကွိမျလောကျ ပွုလုပျပေးတဲ့ အခါ ခါးသေး လာတာကို တှရေ့ မှာပါ။
Plank ထောကျတာက ကယျလိုရီတှကေို လောငျကြှမျးစပွေီး ဝမျးဗိုကျကွှကျသားတှကေို သနျမာစပေါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျ အနအေထားကိုလညျး မှနျစတေဲ့ အပွငျ နောကျကြောနာခွငျး ကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
4. အိပျ ထ မ တငျ လကေ့ငျြ့ခနျး
အိပျ ထ မ တငျ လကေ့ငျြ့ခနျးက ဗိုကျခပျြစတေဲ့ အပွငျ ကြောရိုးမကွီးကိုလညျး သနျမာစေ ပါတယျ။ ကြောရိုးမကွီးကို ဆနျ့တနျးထားတဲ့ အခါ တခွားကွှကျသားတှေ အပျေါ သကျရောကျ နတေဲ့ ဖိအားတှကေိုလညျး လြော့သှားစေ ပါတယျ။ အိပျ ထ မ တငျ လကေ့ငျြ့ခနျးက အမြိုးအစား အမြားကွီး ရှိပါတယျ။
ခွထေောကျ မွှောကျ လကေ့ငျြ့ခနျး
ညီညာတဲ့ ကွမျးပွကျပျေါ လဲခလြိုကျပွီး လကျကို ဆနျ့တနျးထားပါ။ ခွထေောကျကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး မွှောကျလိုကျခလြိုကျနဲ့ 15 ကွိမျ ပွုလုပျပါ။ ရကျ 30 ကွာတဲ့ အခါ ထူးခွားမှုကို တှရေ့မှာပါ။
လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျပွီးတဲ့ အခါ ရအေေးနဲ့ ရခြေိုးပါ။ ရအေေးနဲ့ ရခြေိုးခွငျးက ကွှကျသား နာကငျြမှုကို မဖွဈစပေါဘူး။ ခန်ဓါကိုယျထဲက ကယျလိုရီတှေ ကိုလညျး လောငျကြှမျးသှားစေ ပါတယျ။
ဘီယာကြောင့် ထွက်နေတဲ့ ဗိုက်ကို ချပ်ရပ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၄) ခု
ဗိုက်က အဆီတွေက တက်ဖို့ လွယ်သလောက် ကျဖို့တော့ အလွန် ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ကျစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိလို့ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။
1. စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းပါ။
နေ့စဉ် စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေ ထဲမှာ သကြားနဲ့ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် တွေကို နည်းနိုင် သမျှ နည်းအောင် လျှော့စားပါ။ အချိုရည်သောက်မယ့် အစား ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါ။ အချိုများတဲ့ နို့ပေါင်မုန့်လုံးတွေ အစား အစေ့အဆံတွေကို စားပါ။ သကြားအစား ပျားရည်ကို စားပါ။ အသီးအရွက်နဲ့ အမျှင်ဓါတ် ပါတာတွေကို ပိုစားပေးပါ။
2. ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ပါ။
တစ်နေ့ကို မိနစ် 30 ခန့် ပြေးခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ မိနစ် 30 ကြာအောင် မပြေးနိုင်ဘူး ဆိုရင် လမ်းလျှောက်လို့ ရပါတယ်။ ပြေးခြင်းက လမ်းလျှောက်ခြင်းထက် 2.5 ဆ ပိုပြီး ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
တပတ်ကို နှစ်ခါ၊ သုံးခါလောက် ရေကူးပါ။ အရေးအကြီးဆုံးက လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေဖို့ပါပဲ။ တစ်နာရီရေကူးခြင်းက ကယ်လိုရီ 500 လောင်ကျွမ်းစေ ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်း ကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် အခြေခံကျတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။ တစ်ပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်ခန့် စက်ဘီးစီးပေးလို့ ရပါတယ်။
3. ဝမ်းဗိုက် လေ့ကျင့်ခန်းများ
အသက်အောင့် လေ့ကျင့်ခန်းက ဗိုက်ကို လုံးဝ ချပ်ရပ်သွားစေ မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ အဆုတ်က လေတွေကို အကုန်ရှူထုတ်လိုက်ပါ။ 15 စက္ကန့် ကနေ 20 စက္ကန့်လောက် အထိ အသက်အောင့် ထားပါ။ အဲဒိအတိုင်း 10 ခါ ပြုလုပ်ပါ။ တစ်ရက်ကို4ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခါ ခါးသေး လာတာကို တွေ့ရ မှာပါ။
Plank ထောက်တာက ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ် အနေအထားကိုလည်း မှန်စေတဲ့ အပြင် နောက်ကျောနာခြင်း ကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
4. အိပ် ထ မ တင် လေ့ကျင့်ခန်း
အိပ် ထ မ တင် လေ့ကျင့်ခန်းက ဗိုက်ချပ်စေတဲ့ အပြင် ကျောရိုးမကြီးကိုလည်း သန်မာစေ ပါတယ်။ ကျောရိုးမကြီးကို ဆန့်တန်းထားတဲ့ အခါ တခြားကြွက်သားတွေ အပေါ် သက်ရောက် နေတဲ့ ဖိအားတွေကိုလည်း လျော့သွားစေ ပါတယ်။ အိပ် ထ မ တင် လေ့ကျင့်ခန်းက အမျိုးအစား အများကြီး ရှိပါတယ်။
ခြေထောက် မြှောက် လေ့ကျင့်ခန်း
ညီညာတဲ့ ကြမ်းပြက်ပေါ် လဲချလိုက်ပြီး လက်ကို ဆန့်တန်းထားပါ။ ခြေထောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း မြှောက်လိုက်ချလိုက်နဲ့ 15 ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။ ရက် 30 ကြာတဲ့ အခါ ထူးခြားမှုကို တွေ့ရမှာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးတဲ့ အခါ ရေအေးနဲ့ ရေချိုးပါ။ ရေအေးနဲ့ ရေချိုးခြင်းက ကြွက်သား နာကျင်မှုကို မဖြစ်စေပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်ထဲက ကယ်လိုရီတွေ ကိုလည်း လောင်ကျွမ်းသွားစေ ပါတယ်။